एसिड आक्रमणमा परेकी मुस्कानलाई सेलिब्रेटीको हौसला, सरकारकाे सहयाेग :Nepali Website
एसिड आक्रमणमा परेकी मुस्कानलाई सेलिब्रेटीको हौसला, सरकारकाे सहयाेग
September 26, 2019 3:55 pm Nepaliwebsite
काठमाडौं – एसिड आक्रमणमा परेर उपचार गराइरहेकी वीरगञ्जकी १४ वर्षीया मुस्कान खातुनलाई बलिउड अभिनेता वरुण धावन र कृति सेननले सन्देश पठाएका छन् । कीर्तिपुरमा उपचार गराइरहेकी मुस्कानलाई वरुणले भिडियो सन्देश दिँदै हौसला राख्न आग्रह गरेका हुन्।
मुस्कानलाई बलिउड अभिनेत्री कृति सेननले पनि भिडियो फोन गर्दै उनको हौसला बढाएकी छिन् । सेननले भिडियो कलमार्फत मुस्कानसँग कुराकानी गरेकी थिइन् । अस्पतालको बेडमा रहेकी मुस्कानले वरुण धावन र कृति सेननलाई आफू फ्यान भएको बताएकी थिइन् ।
ट्वीटरमा सार्वजनिक भएको एक भिडियोमा मुस्कानले कृति सेनसँग कुरा गरेको देखिन्छ।
मुस्कानलाई भेट्न गायक राजु लामा पनि बुधबार अस्पताल पुगेका छन् । मुस्कानलाई भेटेर लामाले हौसला दिँदै तिमीलाई देखेर हिमालै हाँसेको बोलको गीत समेत गाएर सुनाएका थिए ।
१४ वर्षीया मुस्कानलाई प्रेम प्रस्ताव अस्वीकार गरेको भन्दै एक युवकले एसिड प्रहार गरेका थिए ।
यता मोडल निती शाहले पनि एसिड आक्रमण गर्ने प्रवृत्तिको विरोध गरेकी छिन् । उनले तेजाब बिक्रीमा नियन्त्रण गर्नुपर्ने धारणा राखेकी छिन् ।
नितीले सामाजिक सञ्जालमा एक लामो स्टाटस पोस्ट गर्दै लेखेकी छिन् – १४ बर्ष कि निर्दोष बालिका मुस्कान खातुन लाई २ जना युवाले वीरगञ्जमा तेजाब आक्रमण गरे। मुस्कानको मुख घाँटी हातमा चोट छ। यो जस्तो अमानवीय अपराध को लागि १० बर्ष को सजाय मात्र छ । अपराधी ४ बर्षमा जेल मुक्त हुन्छन् यो कस्तो न्याय हो। उपचार मा प्रदेश २ सरकार ले केही सहयोग गरेको छ तर उस्को मानसिक पीडा र भविस्य को रेखदेख पनि सरकार ले गर्नुपर्ने होइन ? यो कोमल उमेरमा मा यो पीडा भोग्नुपरेको कारण अनियन्त्रित तेजाब बिक्रीले होइन । कहिले तेजाब बिक्रिमा नियन्त्रण गर्ने?
यसैबीच सरकारले एसिड आक्रमणमा परेकी मुस्कान खातुन र काठमाडौंको रातोपुलमा एसिड आक्रमणमा परेकी जेनी खड्काको उपचार गर्च बेहोर्ने र आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।
यही असोज ७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले एसिड आक्रमणबाट घाइते भएका खड्का र खातुनको सम्पूर्ण उपचार खर्च सरकारले व्यर्होने निर्णय गरेको हो । यसकासाथै उनीहरुलाई जीवनयापन गर्न जनही रू. ३ लाख आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने पनि निर्णय गरेको हाे।
करातेमा भविष्य देखेका रासाइली दाजुभाइ जसले स्वर्ण जितेर ह्याट्रिक हाने
राष्ट्रिय सम्मानसँगै अल विदा केशव भट्टराई, दीपक क्षेत्री !
‘सरोवर सिन्धुली’ युवा समूहको जाडोमा न्यानो अभियान
चलचित्र पर्यटन र छायाङ्‍कनका लागि नेपाल